အက်ပဲလ်ရဲ့အိုင်ဖုန်း ၁၃ မှမျှော်လင့်ရမည့်အရာ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B13B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 12, 2021 ဧပြီလ 11, 2021 Dmytro Spilka ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, နည်းပညာ
အက်ပဲလ်ရဲ့ iPhone 13 လွှတ်တင်မှုကိုဆောင်း ဦး ရာသီအထိဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။
ကောလာဟလများအရလာမည့်မျိုးဆက်သစ် iPhone များကိုစံပုံစံ iPhone 13၊ iPhone 13 Mini, iPhone 13 Max နှင့် iPhone 13 Max Pro များတွင်ပုံစံ ၄ မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။
နည်းပညာအသစ်များနှင့်ကိရိယာအသစ်များကိုစဉ်းစားသောအခါမှေးမှိန်နေသည့်အခိုက်အတန့်မရှိပါ။ များစွာသော Apple နှင့် Samsung ကဲ့သို့သောနည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဟန်းဆက်အသစ်များကိုလူအများစိတ်စွဲမှတ်သွားစေမည့်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပြီးသူတို့ကိုဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာသည်။
နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။ သို့သော်၎င်း၏တိုးတက်မှုနှုန်းတဖြည်းဖြည်းရပ်တဖြစ်လာသည်။ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည်ငါတို့အသုံးပြုကောင်းပြုနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အတော်လေးချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည် ဒီအချိန်ကာလအတွင်းအများဆုံးစမတ်ဖုန်း.
(ပုံရင်းမြစ် - Statista)
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သောပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပစ္စည်းပြandနာများနှင့်စက်ရုံပိတ်ခြင်းစသည့်စိန်ခေါ်မှုများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဟန်းဆက်များကိုစျေးကွက်သို့တင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ သော်လည်း Apple ၏ iPhone 13 ကိုစတင်မိတ်ဆက် ဆောင်း ဦး ရာသီအထိဖြစ်မည်ဟုမယူဆရပါကလာမည့်အိုင်ဖုန်းနှင့်မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်မည်ကိုခန့်မှန်းပြောဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများစွာထွက်ပေါ်နေသည်။ ရှာကြစို့။
Apple က iPhone အတွက် 13
ပထမ ဦး စွာ Apple က iPhone 13 ၏အနာဂတ်ကိုနောင်မျိုးဆက်သစ်ဖုန်းများအတွက်အသစ်တစ်ခုအတွက်ထုတ်လုပ်မည့်အလားအလာရှိသော iPhone ၏အမည်ကိုပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်ကောင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သို့သော်အတိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ S10 မှ S20 သို့ခုန်တက်သွားသော Samsung နှင့်မတူသည်မှာသူတို့၏မော်ဒယ်အများစုသည်ပုံမှန်အနေအထားတွင်ဖြစ်သည်။
ကောလာဟလများကအကြံပြုသည် နောက်မျိုးဆက်အိုင်ဖုန်းများ မော်ဒယ်လေးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် - ပုံမှန် iPhone 13, ၎င်း၏ငယ်သော iPhone 13 Mini နှင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော iPhone 13 Max နှင့် iPhone 13 Max Pro ။ ပရိုဆက်ဆာများနှင့်ဘက်ထရီများကဲ့သို့မော်ဒယ်သစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ မှလွဲ၍ အခြားမျှော်လင့်ချက်များကိုမျှော်လင့်ရန်အခြားအဆင့်မြှင့်မှုများလည်းရှိသည်။
iPhone 12 ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းသည်၎င်း၏အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောအင်္ဂါရပ်များကြောင့်သိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 5G ဆက်သွယ်မှုကိုသာမက၎င်းသည် iPhone 11 ၏ LCD မျက်နှာပြင်ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး OLED မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည်။ A14 Bionic Chip ဒါကစမတ်ဖုန်းအများစုကိုရှက်စရာဖြစ်စေတယ်။ စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေအများကြီးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုက်ရင် iPhone 13 ဟာ“ glow up” လောက်များလာလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့။
(ပုံရင်းမြစ် - iOS Beta သတင်းများ)
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ အကယ်၍ သင်သည် Apple မှခေါက်နိုင်သောဖုန်းကိုမျှော်လင့်နေလျှင် ၂၀၂၁ သည်ယခုနှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းအစားအလားတူဒီဇိုင်းရှိလိမ့်မည်ဟုကောလာဟလများရှိနေသည်။ လွှတ်တင်မှုအသစ်နှင့် ပတ်သတ်၍ အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမှာ Apple သည် notch ပါမလား၊ notchless မျက်နှာပြင်.
ဒါပေမယ့် Notchless ဖြစ်ဖို့အတွက် Apple ကမျက်နှာပြင်အောက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ Face ID ကင်မရာ module တွေပါ ၀ င်မယ့်နည်းလမ်းကိုရှာပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ လွှတ်တင်မှုအသစ်၏ပတ် ၀ န်းကျင်မှဆူညံသံကို အခြေခံ၍ ၎င်းသည် iPhone 13 တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
မျက်နှာပြင် - ကျွန်ုပ်ချစ်သောသူနှင့်တွေ့ရတာပိုကောင်းပါတယ်
ကြီးမားတဲ့နည်းနဲ့ပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ဟန်းဆက်အသစ်ပေါ်ကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကတော့မျက်နှာပြင်ပဲ။ အချို့သောကောလာဟလများက Apple ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားနေသည် LTPO နည်းပညာ Pro handsets နှစ်ခုတွင် 120Hz နှုန်းဖြင့် display ကို refresh လုပ်ခွင့်ပြုသည်။
ဒီထူးခြားချက်ကို Samsung ရဲ့ Galaxy S21 လိုလက်ရှိ Android ဖုန်းများမှာတွေ့နိုင်သည်။ အက်ပဲလ်ဟာအမြဲတမ်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှုန်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူး၊ တချို့လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကတော့ iPhone 12 ဟာလန်းဆန်းမှုနှုန်း ၆၀Hz ရှိတဲ့ iPhone 11 နဲ့အတူတူပဲလို့အကြံပေးကြတယ်။
အနည်းဆုံးတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များရှိရန်အကြံပြုထားသော iPhone 13 ကိုစဉ်းစားလျှင်၎င်းသည် iPhone 12 နှင့်ဆင်တူသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
အခြားသတင်းများအရအက်ပဲလ်၏ကိုယ်ပိုင်ကားထုတ်လုပ်မှုအလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ မြင်နိုင်သောအလင်း၊ အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်လှိုင်းအလျားအနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာများကိုပေါင်းစပ်ပေးသောညမြင်ကွင်းစနစ်အတွက်၎င်းတို့အားလတ်တလောမူပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ Apple ကား စောစောစီးစီးငါတို့ထင်ထက်ငါတို့လမ်းများပေါ်တွင်။
Apple သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကားတစ်စီးကိုတီထွင်ခဲ့သည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်းထုတ်လုပ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည့်မိတ်ဖက်များနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပါအ ၀ င်ပြofနာများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကြီးမားသောလွှတ်တင်မည့်နေ့ရက်ကိုမူမသိရှိရသေးသော်လည်းအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သေးသည်ဟုဆိုခြင်းမှာလုံခြုံစွာရှိသည်။
အများပိုင်သတင်း ပစ္စည်းတွေ iPhone ကို ဖုန်းကို Tech မှ နည်းပညာ
Dmytro သည် Solvid တွင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီး Pridicto ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ သူ၏အလုပ်ကို Shopify, IBM, Entrepreneur, BuzzSumo, Campaign Monitor နှင့် Tech Radar တို့တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။